Matrix nke chi- ejikọtara na oge na ohere, ọrụ ebube na nkwenye (audio) - afrikhepri ntọala
Mọnde, Septemba 21, 2020
Welcome AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
LAlụmdi na nwunye nke sayensị na nke ime mmụọ nwere ike ịkọwa ihe omimi dị omimi banyere oge gara aga, ma dozie nsogbu ndị na-etinye ọdịnihu anyị egwu?
Dika otutu otutu amuma gosiputara, azịza nke a bu “EE” gbara ume. Soro Gregg Braden na njem a pụrụ iche nke mejupụtara sayensị, mmụọ na ọrụ ebube site na asụsụ nke matrix dị nsọ. Nchọpụta ndị mere n’oge na-adịbeghị anya na-enye ihe akaebe a na-enweghị ike ịkọwa na matriks nke Planck chụpụrụ n’ezie. Nke a ọ nwere ike ịbụ njikọ na - ezighi ezi banyere ihe ọmụma anyị, nke na - emebe ihe niile dị na mbara ụwa, akwa dị n'etiti echiche anyị na eziokwu anyị, na enyo, n'ụwa anyị?
Iji webata ike nke matriks n’ime ndu anyi, odi nkpa ighota otu o si aru oru ma kwuo asusu a ghotara. N'ime ihe karịrị afọ 20, Gregg Braden nyochaala nke a. Site n’ebe obibi ndị mọnk dị n'Ijipt, Peru na Tibet, rue ederede ndị echefuru echefu nke ndị ụka ala mbụ jiri rụgharịa ọrụ, o bunyewo anyị ozi nzuzo nke akwụkwọ nsọ site na ọdịnala anyị ndị kacha dị oke ọnụ ahịa na sayensị gosipụtara ya. taa.
Matriki nke Chukwu: ijikọ oge na ohere, ọrụ ebube na nkwenye
17,95€ dị na ngwaahịa
1 dị ọhụrụ site na 17,95 €
nke September 21, 2020 4:45 pm
Publication Ụbọchị 2019-04-10T20:15:33Z
format Versionkpụ version
Atiya AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Railgbọ okporo ígwè ga-ejikọ mba ise ọdịda anyanwụ Africa